Ixabiso eliphantsi lesichumiso seepellets abaThengisi beMatshini kunye noMzi mveliso | YiZheng
Yintoni umatshini wokupholisa isichumisi?
Inkqubo ye- Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisa yenzelwe ukunciphisa ungcoliseko lomoya obandayo kunye nokuphucula imeko yokusebenza. Ukusetyenziswa komatshini opholileyo wegubu kukunciphisa inkqubo yokuvelisa isichumisi. Ukutshatisa nomatshini wokomisa kunokuphucula kakhulu izinga lokupholisa, kunganciphisi kuphela amandla omsebenzi, kodwa kususe ngakumbi ukufuma kunye nokunciphisa iqondo lobushushu lwegranules. Inkqubo ye- Umatshini opholileyo ojikelezayo Ingasetyenziselwa ukupholisa ezinye izinto ezingumgubo kunye nezinto eziyimbumba. Isixhobo sinesakhiwo esihambelanayo, ukusebenza kakuhle kokupholisa, ukusebenza okuthembekileyo kunye nokuziqhelanisa namandla.
Umsebenzi woMgaqo weSichumisi sePellets Cooler Machine
Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisa isebenzisa indlela yokutshisa ubushushu kwizinto ezipholileyo. Ixhotywe ngamaphiko okususa intsimbi ejijekileyo phambi kwetyhubhu kunye nokuphakamisa ipleyiti ekupheleni kwesilinda, kunye nenkqubo yokubhobhoza encedisayo kufuneka ifakwe kunye nomatshini wokupholisa. Njengoko isilinda sijikeleza ngokuqhubekekayo, ipleyiti yangaphakathi yokuphakamisa ngokuqhubekayo inyusa igranules ephezulu kunye ezantsi ukuze idibane ngokupheleleyo nomoya obandayo wobushushu obutshintshisanayo. Isichumiso segranular siza kuthotywa siye kuma-40 ° C ngaphambi kokuba sikhutshwe.
Iimpawu zoMatshini wokuCoca iiPellets Cooler Machine
1. Isilinda se Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisayi-14mm eshinyeneyo eyakhiwe ngokudibeneyo ityhubhu yokujikeleza, enezibonelelo zokuxinana okuphezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo kwentsimbi. Ubunzima beplate yokuphakamisa yi-5mm.
2. Izixhobo zeringi, i-roller ibhanti edibeneyo kunye nesibiyeli zonke zenziwe ngentsimbi.
3. Khetha iiparameter ezifanelekileyo zokusebenza ukulungelelanisa "ifidi kunye nomoya", ngaloo ndlela kuphucula kakhulu ukusebenza ngokutshintshisanayo kwe Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisa nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ngama-30-50%.
4. Isilinda yamkela ityhubhu yomoya, kwaye umzi-mveliso wentsimbi usebenzisa ngqo ipleyiti enye ukuwelda kwi-bobbin ukukhusela ukuvela kwinqanaba elilandelayo; ukuthuthwa okufanelekileyo kwahlulwe kwaba ngamacandelo amabini, kwaye unxibelelwano oluphakathi kwentsimbi kunye nokuqhubekeka kwegolide kukuzikhupha kuqinisekisa ukudityaniswa okuqinileyo.
Isichumisi Pellets Pholisa Umatshini weVidiyo
Izichumisi zePellets ezipholileyo zoMatshini oKhethiweyo
Zininzi iintlobo ze Isichumisi sePellets Umatshini wokupholisa, ezinokuthi zikhethwe ngokweemfuno ezizezona, okanye zilungelelaniswe. Iiparameter zobugcisa eziphambili zibonisiwe kule theyibhile ilandelayo:
Ngo-19600 × 3300 × 4000
Egqithileyo Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Matshini isichumiso Ukwenziwa
Okulandelayo: Umatshini wokuDibanisa isichumisi ojikelezayo